Ny atsy mandany, ny aroa manary - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ratalata Jean Bà il y a 5 années
Efa mahazatra ny sofintsika ny fiteny manao hoe : “Ny miditra amin’ny makarakara dia mivoaka amin’ny kiloadoaka”. Fa ity kosa dia milaza hoe “Ny atsy tsy miditra, ny aroa avoaka”. Tarehimarika no ‘ndeha tsongaina ahitana izany. Andaniny ny fanafarana vary avy any ivelany, ankilany ny mpizahatany tsy miditra. Nyiray mamoaka devise betsaka ary ny iray tsy mampiditra izay nantenaina.
Araka ny vaovao nampahafantarin’ireo mpikirakira ny vary dia tafakatra hatrany maherin’ny 410 000 taonina ny vary nafarana avy any ivelany tamin’ny taona 2013. Nafarana ary nampidirina teto Madagasikara tamin’ny taon-dasa. Avo roa heny izany nafarana izany raha ampitahaina amin’izay nafarana tamin’ny 2012. Vola tsy toko tsy forohana izany raha avadika resaka vola. Ampitomboy 1 000 Ar ny kilao. Izany hoe 410 000 000 ampitomboina 1 000 ariary. Na avadika vola euro aza mbola vola be hatrany. Izay no vola ahiny navoaka tamin’ny taon-dasa.
Maro no antony mety nampiakatra ny vary nafarana. Teo ny orana tsy ampy. Nisy ihany koa ny tsy fahampian’ny fanohanana an’ireo tantsaha mpamboly. Manampy trotraka koa ny asan’ny valala. Ary ny farany dia taona nisian’ny fifidianana iny taona iny. Izany hoe raha nisy ny fifidianana dia nesorina izay mety hiteraka olana ara-tsosialy. Isan’izany ny resaka vary. Niantohana ny fitazonana ny vidin’ny vary tsy hiakatra fa sao mampirotaka ny vahoaka izany. Marihina koa fa mety nisy ireo kandida nanafatra vary natao ho zarainy nandritra ny fampielezan-kevitra.
Izay ny tarehimarika iray. Tranga nitarika famoahana vola vahiny (devise) betsaka. Ny tranga faharoa dia ny tsy fahatongavan’ireo vahiny mpizahatany. Vahiny tsy tonga mira vola vahiny (devise) tsy miditra. Tsisy afa-tsy 200 000 ny olona tonga teto Madagasikara tamin’ny taona 2013. Tsiahivina fa nahatratra 400 000 ny isan’ny olona nitsidika teto tamin’ny 2008. Very vola izany ny firenena raha ampitahaina ireo daty ireo. Mbola very vola ihany koa ny firenena raha novinavinaina fa ho tafakatra maherin’ny 220 000 ny isan’ny mpizahatany tamin’ny 2013. Ny antony nampihemotra an’ireo mpizahatany dia noho ny raharaha fandoroana vahiny tany Nosy Be andaniny ary noho ny resaka Remenabila tany atsimo ankilany. Manampy trotraka koa ny fisian’ny tsy fandriam-pahalemana (baomba etsy sy ny disadisa politika eroa, fanenjehana vazaha any amin’ny hotely sy any amin’ny toerana fitsangatsanganana…). Tsara fantatra fa ny vahiny iray dia mandany 65 euros isan’andro mandritra ny fotoana hipetrahany eto Madagasikara. Ny mpizahatany iray dia maharitra eo amin’ny 20 andro eo manome 1 300 euros mandritra ny fipetrahany eto an-toerana. Izany dia araka ny tarehimarika hita ao amin’ny rohy : http://www.tourisme.gov.mg/ sy http://www.info-tourisme-madagascar.com/. Tombanana mandany 2 500 euros ny olona iray izany hoe tafakatra 7 500 000 ariary ary tafiditra ao anatiny ny saran’ny fiaramanidina avy any ivelany. Izany hoe raha olona 200 000 no tsy tonga dia tafakatra 260 000 000 euros no tsy niditra teto Madagasikara (raha tsy nisy diso ny kaonty !).
Izao tokoa ny hoe ny vola tokony nampidirin’ireo mpizahatany tsy niditra andaniny ary, ankilany ny foto-tsakafo namoaka vola vahiny betsaka. Misy ho saintsainina ireo tarehimarika ireo. Marihina fa raha izao valala be mpilaza izao no tena misy dia ho mbola mafy ny hahazo amin’ity taona ity manampy trotraka koa ny fisian’ireo tanimbary manodidina an’Antananarivo efa totofana ankehitriny. Mbola eo koa ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny fikatsahana fitoniana dia hitarika fanafarana vary tahaka izay hita tamin’ny taona 2013 hatrany. Tarehimarika natao isaintsainana sy isarihana ny sain’izay te hitondra ity firenena ity.